के सर्पले सम्मोहित गर्छ ? | Ratopati
personरातोपाटी डेस्क exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २९, २०७६ chat_bubble_outline1
धेरै मानिसहरु सर्पसँग डराउँछन् । यसरी सर्पसँग डराउनु स्वभाविक नै पनि हो । किनभने, कतिपय सर्पहरु यति विषालु हुन्छन् कि तिनीहरुले टोकेपछि तत्काल उपचार नपाए मानिस ठहरै हुन सक्छ । तर सर्पसँग मान्छेको डर यसको विषको कारणमा मात्रै सीमित छैन । सर्पका बारेमा परम्परागत रुपमै रहेका धेरै अन्धविश्वासहरुले मानिसहरुलाई नराम्ररी जकडेका छन् । त्यस्ता अन्धविश्वासहरुले सर्पलाई एउटा सामान्य प्राणीको रुपमा हैन, अलौकिक प्राणीको रुपमा नै स्थापित गरेको छ । सर्पलाई यस्तो अलौकिक प्राणीको रुपमा स्थापित गर्ने विभिन्न अन्धविश्वासहरुमध्येको एउटा अन्धविश्वास हो – सर्पले आफ्नो शिकारलाई पक्रनको लागि सम्मोहित गर्छ !
सर्पले आफ्नो आँखा नै झिम्क्याउन सक्दैन । सर्पको आँखा सिसाजस्तो पारदर्शी झिल्लीले ढाकिएको हुन्छ । यसले गर्दा हामीलाई सर्पले लगातार हेरिरहेको जस्तो भान हुन्छ ।
मानिसमा यो अन्धविश्वास पैदा हुनुको एउटा कारण चाहिँ सर्पले आँखा नझिम्क्याइकनै कुनै पनि प्राणी, आफ्नो शिकार वा मानिसलाई लगातार हेर्न सक्नुले नै हो । यथार्थमा, सर्पले आफ्नो आँखा नै झिम्क्याउन सक्दैन । सर्पको आँखा सिसाजस्तो पारदर्शी झिल्लीले ढाकिएको हुन्छ । यसले गर्दा हामीलाई सर्पले लगातार हेरिरहेको जस्तो भान हुन्छ । वास्तवमा, यसै कारणले गर्दा नै पनि सर्प सुतिरहेको छ वा जागृत छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिँदैन ।
काँचुली फेर्दा सर्पको आँखालाई ढाकेर रहेको पारदर्शी झिल्लीसमेत शरीरको माथिल्लो पत्र पूर्णरुपमा परिवर्तन हुन्छ । यस अवस्थामा सर्पको आँखा दुधिया र बादल लागेको जस्तो देखिन्छ ।
सर्पको आँखा त्यसबेलामा मात्र पारदर्शी झिल्लीबाहिर प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ, जब यसले आफ्नो काँचुली फेर्छ । यसरी काँचुली फेर्दा सर्पको आँखालाई ढाकेर रहेको पारदर्शी झिल्लीसमेत शरीरको माथिल्लो पत्र पूर्णरुपमा परिवर्तन हुन्छ । यस अवस्थामा सर्पको आँखा दुधिया र बादल लागेको जस्तो देखिन्छ । यसो हुनुको कारण चाहिँ सर्पको पुरानो काँचुलीको आँखालाई ढाक्ने पारदर्शी झिल्ली र नयाँ झिल्लीको बीचमा निस्कने तरल पदार्थ नै हो । यो तरल पदार्थ शरीरबाट पुरानो काँचुलीलाई त्याग्न सजिलो पार्नको लागि निस्कने गर्छ । यसबेला त सर्पको हेर्ने क्षमतामा निकै नै कमी आउँछ । त्यसो त, सामान्य अवस्थामा नै पनि सर्पको हेर्ने क्षमता अति कम हुन्छ । यसले अति कम दूरीको गतिविधि मात्रै देख्न सक्छ । सर्पले शिकार पक्रनको लागि बढी मात्रामा दृष्टिभन्दा पनि गन्ध पहिचान गर्ने शक्तिको प्रयोग गर्ने गर्छ ।
Main Photo: https://cdn.abcotvs.com
July 25, 2019, 12:32 a.m. nike cortez women
There are certainly numerous details like that to take into consideration. That isagreat level to convey up. I offer the ideas above as general inspiration but clearly there are questions like the one you deliver up the place the most important factor will likely be working in trustworthy good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, but I am sure that your job is clearly recognized asagood game. Each girls and boys really feel the influence of justamoment抯 pleasure, for the remainder of their lives.